Vitsy sy psd maimaim-poana ho an'ny Halloween | Famoronana an-tserasera
Vektor vaovao sy psd ho an'ny Halloween
Tonga ny fararano ary miaraka aminy ny fety fety, izay mitaky amin'ny alàlan'ny sary an-tsary ny loharanom-pahalalana marobe isan-karazany, noho izany dia nanao fanangonana kely ny vaovao izahay tamin'ny vector sy psd mba halefa maimaimpoana na saika maimaimpoana, indrindra avy amin'ny voatavo, ireo kintan'ny sary mahafinaritra amin'ity antoko ity.
Betsaka ny ohatra fa ireo izay afaka manampy anao indrindra indrindra mahita ny fironana sy ny loko amin'ity taona ity dia ireto no nentinay etsy ambany:
1 fisie psd alaina ao amin'ny freepik.es
fisie psd alaina ao amin'ny freepik.es
Sary Halloween avy amin'ny freepik.es
Ny ps freepik.es dia tena ilaina sy miovaova, izay, araka ny fantatry ny maro aminareo, dia tranokala azo ampiharina miaraka amin'ny loharanom-pahalalana isan-karazany, ary maro amintsika no mitodika mitady fanampiana amin'ny asantsika. Matetika loharanom-pahalalana alaina be izy ireo ary raha voafaritra tsara izy ireo ary efa nahantona nandritra ny fotoana kelikely dia tena hampiasaina, noho izany dia tsy ho tany am-boalohany, fa raha ny voatavo dia tsy misy olana, dia mitovy daholo izy rehetra. Ny voatavo ao amin'ny Freepick.es dia nohazavaina, ary na dia efa 4 taona aza izy dia tonga lafatra ho an'ny flyers. Na izany na tsy izany, raha mila fanavaozana ianao amin'ity taona ity dia nanolotra sary vaovao maherin'ny 1.200 XNUMX vonona hampiasana izy ireo.
Azonao jerena eto ireto psd ireto: freepik.es
ohatra avy amin'ny template.net
Tranonkala Template.net pmanome ohatra sy maodely maimaim-poana marobe miaraka amina motifin'ny zaza, tena ilaina hamaly ny fangatahana avo amin'ny paositry ny fety any an-tsekoly. Fa raha miasa any amin'ny disko na trano fisotroana cocktail ianao dia aza manahy fa misy ihany koa ny peta-drindrina manao "club night".
Azonao jerena eto ny tranokala Template.net: Template.net
ohatra avy amin'ny elegantflyer.com
Web manam-pahaizana manokana amin'ny fanolorana fanasana, dia safidy iray hafa hahitana fitaovana ilaina hiaraha-miasa. Miaraka amin'ny tolotra iray eo amin'ny fonon'ny tranonkalany, izay hamidy afaka herinandro araka ny fanisana azy, ny eleganflyer.com dia manome psd halefa amin'ny vidiny mora, na dia manome endrika aza izy io miaraka amina fitsaboana be pitsiny amin'ny afisy amin'ny fety alina .
Azonao jerena eto ny tranokala Elegant Flyer: Elegantflyer.com
Ary farany, pejy iray misy ny fanangonana psd maimaimpoana, somary voafaritra manokana amin'ny fety amin'ny alina (noho ny habetsaky ny sary masina sy toerana malalaka ho an'ny dj), manana ny tranokala template-psd-template ianao, izay misy mihoatra ny 20 modely alaina.
Azonao jerena eto ny tranokala template psd maimaim-poana: mundoformes.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Vektor vaovao sy psd ho an'ny Halloween
TEXT ART: Sary famantarana sy bokotra ho an'ny mpamorona miaraka amin'ny Mac sy PC